प्लास्टिकको चामल प्रकरण : हल्ला कि वास्तविकता ? (खास खुलासा) - Himalayan Kangaroo
प्लास्टिकको चामल प्रकरण : हल्ला कि वास्तविकता ? (खास खुलासा)
Posted by Himalayan Kangaroo | ३१ असार २०७४, शनिबार ०७:०३ |
काठमाडाैं । प्लास्टिकको चामल बिक्री गरेको भन्दै मंगलबार काठमाडौं स्वयम्भूस्थित सानो भ-याङ्गबाट प्रहरीले व्यवसायी टकंप्रसाद शेरचनलाई पक्राउ ग-यो । नेपालमा पहिलो पटक सुनिएको चामल नै प्लास्टिकको भन्ने विषयले सबैलाई चकित बनायो । उक्त चामल अनुसन्धानका लागि प्रहरीले मंगलवार नै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहलमा पठाईसकेको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी पूर्णचन्द्र जोशीका अनुसार चामलको गुणस्तर रिपोर्ट अझै प्राप्त भएको छैन । पक्राउ परेका चामल व्यवसायी शेरचन भने जमानतमा छुटिसेकेका छन् ।
शेरचनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको १ नं.गणमा चामलको आपूर्ति गर्ने गरेका थिए । मंगलवार बिहान गणका प्रहरी अधिकृतले खाना खान लाग्दा सेलाएको खानामा अखाद्य बस्तु रहेको आशंका भएपछि सानो भ-याङ्गबाट गुण नियन्त्रणका कर्मचारीसहित पुगेको प्रहरीले व्यवसायी शेरचनलाई पक्राउ गरेको थियो । साथै प्रहरीले शेरचनको चामल गोदामसमेत शिल गरेको थियो ।
नेपालमा निकै चर्चाको विषय बनेको प्लास्टिकको चामल प्रकरणले आम मानिसमा त्रास र उपशंकाहरु पनि जन्माई दिएको छ । साँच्चै प्लास्टिकको चामल हुन्छ त ? हामीले खाई रहेका चामल प्लास्टिकका हुन् त ?
विश्व परिघटना हेरौँ
प्लास्टिक चामल सम्बन्धी हल्ला विश्वका विभिन्न देशमा सन् २०१० ताका नै फैलिएको थियो । तर यो खबर तयार गर्दासम्म विश्वको कुनै पनि देशको ल्याब परिक्षणमा चामल प्लास्टिकको भएको भनी प्रमाणित भएको छैन ।
अफ्रिकामा पहिले भेटियाे !
सन् २०१० मा अफ्रीकी मुलुक घाना र सेनेगलमा प्लास्टिकको चामल भेटिएको भनी व्यपाक चर्चा भएको थियो । तर ति देशहरुमा भेटिएका चामलको ल्याब परिक्षणमा त्यो चामल प्लास्टिकबाट बनेको भनी प्रमाणित हुन सकेन । बरु उल्टै यसप्रकारको प्लास्टिकको चामल बनाउन लागत निकै महँगो हुने अर्को तथ्य फेला पर्यो । सामान्य चामल भन्दा महँगो वस्तु चामलमा मिसाएर बेच्न ब्यापारिक दृष्टिले समेत लाभदायक हुँदैन । तर सेनेगल, गाम्बिया र घानाबाट चामल नक्कली बन्छ भन्ने हल्ला चै सर्वत्र फैलियो । जस्को आधिकारिकता प्रमाणित हुन सकेन । युटुवमा राखिएका अनेकौँ भिडियोहरु पनि हल्लाकालागि मात्रै सिमित छन् ।
कोरियामा समाचार बन्याे
प्लास्टिक चामल सम्बन्धमा खोजी गर्दा कोरियन टाइम्सको एउटा समाचार पनि भेटियो । जस्मा नक्कली चामल बन्न सक्खरखण्ड र आलुमा प्लास्टिक मिसाईन्छ भनिएको यो कुरा अहिलेसम्म प्रमाणित हुन सकेको छैन । फेरी फलाम मिसावट गर्न फलाममा सुन टाल्ने काम त पक्कै हुन सक्दैन ।
भारतमा महिलाले भातकाे डल्लाे रबर झै उफारिन !
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित बङ्गाली स्वीट्समा खाना खान गएकी एक महिलालाई चामलको स्वादमा शंका लाग्यो । कान्ता आलडिय नामकी उक्त महिलाले शंका कै भरमा आफ्नो प्लेटमा बाँकी रहेको खानालाई हातले डल्लो पारिन र भुँईमा छोडिन् । भातको डल्लो रबर बलझै उफ्रियो । उक्त भात र चामललाई परिक्षणको लागि प्रयोगशाला पठाईएको छ ।
विवरणहरु आउन बाँकी नै छन् । यो समाचार भारतको प्रख्यात समाचार संस्था एबिपी टेलिभिजनले गत जुन ३ तारिखमा प्रशारण गरेको थियो । समाचारमा उक्त चामल चीनबाट आयात गरिएको भनिएको छ । चामल प्लास्टिकको भएको दावी गरिए पनि प्रमाणित भएको छैन ।
चीनियाँ कृषि उत्पादनकाे बजार रोक्न प्लास्टिकको चामलकाे हल्लाः बिबिसी निश्कर्ष
यि सञ्चार माध्यमहरुले नक्कली चामलबारे बिभिन्न समयमा समाचारहरु प्रशारण गरेका छन । बिबिसीको निश्कर्ष छ कि चीनियाँ कृषि बजारको उत्पादन रोक्नलाई प्लास्टिकको चामल बारेको हल्ला विश्वमा फिँजाईएको छ ।
सिएनएनमा यस्ताे अायाे समाचार
प्रख्यात अमेरिकी मिडिया सिएनएनले हल्लाहरुलाई आधार बनाएर समाचार सम्प्रेषण गरेको छ । सिएनएनका समाचारमा प्लास्टिकको चामल प्रमाणित भएको छैन ।
एमएसएच न्यूजले पनि कुनै प्रमाण पेश गरेको छैन । विश्वमा आधिकारिक रुपमा प्लाष्टिकको चामलका कतै पनि पुष्टि नभएको सन्दर्भमा नेपालमा आशंका गरिएको चामल प्लाष्टिकको भएको प्रमाणित होला त ?
Previousक्लब डान्समा मस्त सुरिली नर्स रेणुका
Nextराजधानीका यी ठाँउमा हुँदैछ लोडसेडिङ
देश विकासका लागि पारदर्शी र सुशासन हुनुपर्छ : उपनेता गच्छदार
३० जेष्ठ २०७५, बुधबार ०२:४५
केही स्थानमा मतगणना सुरु, अधिकांश स्थानमा आज
१ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०१:१६